Gini kpatara (na Otu esi eme ya) iji tinye ego na Digital gị | Martech Zone
Wednesday, December 5, 2012 Tọzdee, Disemba 4, 2012 Caroline Watts
Ntughari uche, omume nke ijere ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na ndị gị na ha rụbuuru na ntanetị, abụrụla ezigbo nke ahịa ahịa dijitalụ, yana maka ezi ihe kpatara ya: ọ dị oke ike ma dịkwa oke ọnụ.
Ntughari, n'ụdị ya dị iche iche, nwere ike ịbụ mmeju na atụmatụ dijitalụ dị adị, ma nwee ike inyere gị aka ịmatakwu mkpọsa ị na-agba. N'ime edemede a, m ga-ekpuchi ụzọ ole na ole ndị ahịa nwere ike isi zighachi azụ iji bulie ike nke ọwa ha na-eji. Ma nke mbụ, lee ntakịrị nzụlite na teknụzụ n'onwe ya:
Olee otu na ihe kpatara na iweghachi ego na aru oru
Na ụdị ya kachasị mfe, retargeting na-eji kuki ihe nchọgharị na-enweghị aha iji mee mgbasa ozi naanị maka ndị gara na weebụsaịtị gị mana ha hapụrụ na-enweghị azụ ahịa. Ọ dị oke mma n'ihi na ọ na-elekwasị anya na mgbasa ozi gị na ndị maara nke ọma ma nwee mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Nke a na - enye gị ohere ime ka mgbanwe dị n'etiti ndị nwere mmasị na ịbawanye ụgwọ site na ịchekwa dollar ad gị maka ndị na - ege gị ntị ruru eru.
A pụkwara itinye otu teknụzụ ahụ na mmekọrịta ndị ahịa ndị ọzọ dị iche iche, dị ka ịmepe email, ọ nwere ike ịbụ mgbakwunye dị oke mma maka ngwaọrụ ahịa ndị ọzọ ị na-eji agakwuru ndị ahịa ọhụụ ma ọ bụ soro ndị nwere mmekọrịta ugbu a.
Iweghachite maka ndị na-ere ahịa Search
Ọ bụrụ n ’itinye nnukwu ego na ya PPC ọchụchọ, retargeting kwesịrị fọrọ nke nta-atụkwasịkwara gị dijitalụ ulo mgwo agha. Mgbasa ozi ọchụchọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị ike isi eme ka okporo ụzọ mbụ gaa na saịtị gị, mana ole n'ime ndị ahụ na-agbanwe na nleta mbụ? Y’oburu n’di ka otutu ndi ahia, otutu ndi mmadu ichotara na saiti gi a ghaghi itughari ozigbo, ma oburu na ha gbanwee. Nke a bụ ebe ịchigharị na-abata. Ichigharị na-enyere gị aka ịbawanye ntụgharị n'etiti atụmanya bara uru ndị gara na saịtị gị, mana ị zụtabeghị.
Ọ bụrụ na ị na-atụkwasị obi na nyocha PPC, ị na-akwụ ezigbo ego iji weta ndị mmadụ na saịtị gị, na iweghachi ego nwere ike inyere gị aka imefu ego ahụ. Y’oburu n’inwe peeji nke ibuputara maka uzo ahia ichoro ego gi, odi nfe kari ichota ndi obia n’agha ozo.
Na-eweghachite ego maka Ahịa Ọdịnaya
Otu n'ime ihe ịma aka kasịnụ maka ndị ahịa ọdịnaya na-eme ndị na-agụ akwụkwọ oge niile ka ha bụrụ ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ịre ahịa ọdịnaya bụ ụzọ dị oke mma iji gbaa ndị nleta weebụ ọhụụ ume, ROI dị mma na-esikarị ike nnweta. Gba ume ntinye aha email na itinye uru mgbe niile nwere ike inye aka, mana ọ nwere ike ọ gaghị ezuru mgbe niile. Ọ bụrụ na ị na-anyafe okporo ụzọ na ọdịnaya gị, mana ị naghị ahụ mgbanwe ndị ịchọrọ, ịtụgharị uche nwere ike inye aka.
Nwere ike weghachite ndị ọbịa na-aga na saịtị gị ka ị gụọ ọdịnaya gị, ma gbaa ha ume ka ha lelee ngwaahịa na ọrụ anyị. Ọdịnaya na-ewuli ndị na-ege ntị dị mkpa maka azụmaahịa gị, na iweghachite nwere ike inyere gị aka ịgbanwe ndị na-ege ntị ka ọ bụrụ ndị ahịa.
Ntughari maka ndi na-ere ahia Email
Marketingre ahịa email bụ ihe eji arụ ọrụ maka ọtụtụ ndị ahịa dijitalụ. Ọ bụrụ n’ị lekwasịrị anya na email, ọ nwere ike ọ gaghị edo anya otu ngwa ọrụ mgbasa ozi ngosipụta dị ka ilegharị anya nwere ike isi nyere aka nke ọma, mana ịghachị email bụ ngwa ọrụ zuru oke maka ndị na-ere ahịa email.
Ntughari email na-enye gị ohere ijere mgbasa ozi ngosi nye onye ọ bụla mepere email, ma ha pịrị ma ọ bụ na ha agaghị abanye. Cheedị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nke mepee email gị nwere ike ịhụ akara gị mgbe ị na-eme nchọgharị na weebụ ma emechaa? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe email retargeting nwere ike ime. Nwere ike izipu ọtụtụ ozi ịntanetị na-enweghị ike ịmecha ndepụta gị, yana ịmegharị email na-enye gị ohere ịnọrọ n'ihu ndị nnata email gị na-enweghị ike iji nnukwu ozi email merie ha.
Ọ bụrụ na ị na-ala azụ ịmalite mgbasa ozi ngosi n'ihi na ị na-agba ọsọ mkpọsa ahịa na-aga nke ọma, ụjọ gị nwere ike ọ gaghị abụ ihe ziri ezi. Ichigharị na-enyere gị aka ịmatakwu ọwa ndị ọzọ ị na-eji, agbanyeghị ọwa ndị ahụ nwere ike ịbụ.
Tags: ichaghari ọdịnayaemail weghachiteakwụ ụgwọ nyochaghachiteppc na-echegharịretargeting
Caroline Watts bụ onye njikwa ahịa na Ntughari, onye na-enye ihe ngosi ọrụ zuru oke nke ọkachamara na retargeting na ndị na-ege ntị.